विश्व व्यापार संगठनमा पहिलो पटक महिला महानिर्देशक नियुक्त « नारी खबर >
विश्व व्यापार संगठनमा पहिलो पटक महिला महानिर्देशक नियुक्त
फाल्गुन ६, २०७७ बिहीबार
एजेन्सी – विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को महानिर्देशक नाइजेरियाकी पूर्व अर्थमन्त्री एन्गोजी ओकोन्जो–इवेला नियुक्त भएकी छिन् । उनी डब्लुटिओको इतिहासमै पहिलो महिला महानिर्देशक बन्न सफल भएकी छन् ।
नवनियुक्त ६६ वर्षीया अर्थशास्त्री ओकोन्जो भर्चुअल बिधिबाट भएको निर्वाचनबाट डब्लुटिओको महानिर्देशकमा नियुक्त भएकी हुन् । व्यापार क्षेत्रको यस शक्तिशाली संस्थाको महानिर्देशक पदमा नियुक्त भएसँगै उनले सुदृढ डब्लुटिओ धेरै मुलुकको चाहना रहेको बताइन । लगभग निस्कृय र पक्षघातकै अवस्थामा पुगेको डब्लुटिओलाई पुनर्जीवित तुल्याउनु पनि ओकोन्जोको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ ।
उनले डब्लुटिओका सामुन्ने धेरै चुनौतीहरु रहेका छन् भन्दै मिलेर कार्य गरिए डब्लुटिओलाई अझ बलियो, बढी जीवन्त र आजका यथार्थसँग अझ अनुकूलित बनाउन सकिने बताइन ।
डब्लुटिओलाई विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण उत्पन्न आर्थिक सं’कटबाट मुलुकहरुलाई राहत प्रदान गर्न डब्लुटिओको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको छ ।
एक जना पश्चिमी मुलुकका कुटनीतिज्ञले ओकोन्जो महिला भएको वा अफ्रिकाकी भएकैले नछानिएको बताउँदै डब्लुटिओका सामुन्ने उत्पन्न चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने योग्यता, अनुभव र गुण ओकोन्जोमा रहेको स्पष्ट पारिन् । जेनेभामा मुख्यालय रहेको डब्लुटिओ गत वर्ष अगष्टदेखि नै नेतृत्व विहीन थियाे । मार्च १ देखि कार्यभार सम्हाल्ने उनको कार्यकाल सन् २०२५ अगष्ट ३१ सम्म हुनेछ ।
एक वर्ष कार्यकाल रहँदै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रोबर्टो अजिभेडोले राजीनामा गरेपछि डब्लुटिओमा नयाँ प्रमुखको नियुक्ती हुन सकेको थिएन । विश्वका १६४ मुलुक सदस्य रहेको यस संस्थाको नेतृत्व चयन सहमतिका आधारमा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । शुरुमा आठ जना उम्मेदवार रहेपनि गत नोभेम्बरमा तीमध्ये एक व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
तर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले ओकोन्जोको नाममा असहमति जनाएर वि’वाद खडा गरिदिएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण कोरियाली व्यापार मन्त्री यू म्युङ–हीलाई नियुक्त गर्न चाहेको थियो । तर अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन नियुक्त हुने पक्का भएपछि म्युङ–हीले आफ्नो नाम सम्भावित सूचीबाट हटाएका थिए ।
अमेरिकी कूटनीतिज्ञ डेभिड बिस्बीले संयुक्तराज्य अमेरिका डा. ओकोन्जोसँग मिलेर कार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए । सन् १९९५ मा डब्लुटिओ स्थापना भएपछि ओकोन्जो कार्यकारी निर्देशक हुने सातौं व्यक्ति हुन ।
नाइजेरियाली ओकोन्जोको महानिर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि संयुक्तराज्य अमेरिका, युरोपेली युनियन र अफ्रिकाले समर्थन जनाएका थिए । यतिबेला डब्लुटिओ धेरै किसिमका चुनौतीको घेरामा परेको छ । कोभिड–१९ शुरु हुनुअघि नै विश्व अर्थतन्त्रमा सं’कट देखिएका थिए । डब्लुटिओले व्यापार वार्तालाई सहजीकरण गर्न सकिरहेको थिएन भने संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनाबलाई मत्थर बनाउन असमर्थ भएको थियो ।
घटना हुने दिन अमर लामाले मदन भण्डारीको सुटकेश बजार्दै झार्‍याे : तुलसा पाण्डे
अब स्थानीय तहका कर्मचारी अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवा हुन पाउने
प्रोफेसर बन्ने रहर छाडेर विद्युत प्राधिकरणको हाकिम
नेपाली छोरी बनिन् यूकेमा वकिल
नेपाली बीमा कम्पनीमा पहिलो महिला सीईओ नियुक्त
ज्योति मगरको हातबाट खानेकुरा पाउँदा ग्राहक दंग
६ करोड खाएर आमालाई सडकमा पुर्‍याउने राष्ट्रबैंककी निर्देशक पक्राउ
Copyright ©2021 नारी खबर All Rights Reserved. | Website by appharu.com